Samsung waxay heshay oggolaansho ka timid Mareykanka si ay uga iibiso shaashadda Huawei | Androidsis
Xayiraada ay dowlada Mareykanka saartay shirkadaha Mareykanka inay la shaqeyso Huawei ayaa lagu kordhiyay dalal kale sida England (ARM) iyo South Korea (Samsung). Markii bilihii la soo dhaafay, shirkadda Shiinaha ee Huawei ayaa aragtay sida ayaa waxaa ka dhamaaday adeeg bixiyayaashii si ay u sii wadaan ku soo saarida taleefannada casriga ah suuqa.
Dhowr toddobaad ka hor, Huawei waxay sheegatay in xayiraadda ganacsiga Mareykanka awgood, ay ka dhammaatay suurtagalnimada sii wadaan inay adeegsadaan processor-radooda, Dhibaato dheeri ah oo horeyba looga helay qaybo kale, taas oo ku qasabtay inay adeegsato MediaTek (soo saaraha Shiinaha).
Si kastaba ha noqotee, toddobaadyadii la soo dhaafay, shirkado badan ayaa ogolaansho ka codsaday Waaxda Ganacsiga ee Mareykanka, suurtagalnimada in lala shaqeeyo Huawei, iyadoo la siinayo qaybo ka mid ah (ma ahan dhammaantood). Dhawaan, labadaba Intel sida AMD helay ogolaansho. Shirkadii ugu dambaysay ee heshay go-hor waxay ahayd Samsung, oo waxay awoodi doontaa inay ka iibiso baalasheeda shirkadda Aasiya ee Huawei boosteejooyinka soo socda ee ay ka bilaabi doonto suuqa.
Waqtigan xaadirka ah, Samsung waxay heshay ogolaansho inay ganacsi ku sameyso Samsung Display. Sida la filayo, taasi sidoo kale waxay codsadeen ogolaansho si looga ganacsado Samsung Samsung, Qaybaha qaybaha u oggolaan lahaa Huawei in ay dib u isticmaasho processor-yada Kirim, maaddaama Samsung ay soo saari karto iyaga oo aan wax dhibaato ah qabin.
Tan iyo markii dowladda Mareykanku ay xayiraad saartay ganacsiga Hauwei, shirkadda Aasiya waxay aragtay sida, kaliya maahan ayaa ka dhammaaday nidaamkii lagu shaqeyn jiray, taas oo ku qasabtay inay soo bandhigto nidaamkeeda ku saleysan Android, laakiin sidoo kale lagu qasbay inay raadiso alaab-qeybiyeyaal cusub oo loogu talagalay mid kasta iyo mid kasta oo ka mid ah qaybaha lagama maarmaanka u ah soo saarista boosteejooyinkeeda Shiinaha, waana arrin nasiib-darro aan suurtagal ahayn.
In Donald Trump uu waayi karo doorashada soo socota, kuma xirna qaadista cunaqabateynta. Waa in laxasuustaa inay ahayd Obama, wuxuu ahaa madaxweynihii ugu horeeyey ee diida awooda ay Huawei kaheleyso Mareykanka (Joe Biden wuxuu katirsanyahay isla xisbiga Dimuqraadiga sida Barack Obama).
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Samsung waxay heshay US-go inay horay u iibiso shaashada Huawei
Kani waa taleefanka lagu garto TCL ee fiidiyowga ah!